Fikarohana momba ny firaisana Prashant Solomona dia nidina tany an-kibo tao anatin'ny volana 4 volana nanaovana famoriam-bahoaka - Fikarohana momba ny vatana teraka
Salama Salomon dia niroso nankany an-kibo tao anatin'ny volana 4
Nalazain'ny Prashant Solomon
Mahatsiaro ny fiainany taloha sy ny fahafatesany ho Monk i Prashant
“Tamin'ny fahazazako, ny fahatsiarovako voalohany dia ny tao amin'ny efitrano nisy labozia be dia be. Tsapako fa tao amin'ny monasitera iray aho ary tamin'ny lafiny rehetra, fantatro fa tany Eropa izy io, azo inoana fa tany Italia tamin'ny taonjato fahadimy ambin'ny folo na fahenina ambin'ny folo. Nandry teo am-pandriana aho nanao akanjo lava ary nisy moanina kely nipetraka teo akaikiko, nihazona ny tanako havia nitomany. Hoy izy, amin'ny fiteny izay heveriko fa latinina, “Veloma, Ray.”
Ny zavatra manaraka dia fantatro, miparitaka eny ambonin'ny habakabaka ny 5 na 6 metatra eo ambonin'ny vatako. Mijery aho ary mahita ny fatiko. Mônkely tranainy aho tamin'ny 70-80 taona, izay Caucasian. Dia mahita hazavana eny an-joron'ny efitra aho ary midona ao anatiny.
Miala sasatra any an-kibon-dreniny i Prashant
Ny zavatra tadidiko manaraka dia ny hoe ao anaty rahona midina mankany amin'ny Tany aho, karazana toy ny Google Earth amin'izao fotoana izao, izay ahafahanao miditra sy manakaiky kokoa.
Amin'izao fotoana izao dia tsapako fa tsy manana vatana aho. Toe-pahatsiarovan-tena midina ety an-tany aho, mihidy sy ambany aho. Izaho dia mikasika ny tongotra 100 ambony ambonin'ny tany izay toa tsena na bazaar.
Afaka mahita olona roa mihazona tanana sy mihira aho. Ny lehilahy dia manao akanjo manga manga sy jeans manga ary ny vehivavy dia mitafy sari orange. Manjary manakaiky kokoa an'ilay vehivavy aho ary miditra ao an-kibony. Ireo no ray aman-dreniko amin'izao fotoana iainako izao.
Fanamarinana ny Fahatsiarovana ny Prashant
Tamin'ny voalohany, nihevitra aho fa nofinofisin'ity fahatsiarovan-tena ity nandritra ny fahazazany, na dia mazava loatra aza fa mbola velona izy na dia tamin'ny faha-17 taonany aza. Indray andro, tamin'izaho mbola zatovo dia nolazaiko tamin'ny ray aman-dreniko izany.
Rehefa tonga teo amin'ilay anjarako izay nilazako azy ireo fa nihira izy ireo ary nanoritsoritra ny toerana sy ny akanjon'izy ireo, dia nifampijery izy ireo.
Nolazain'izy ireo tamiko avy eo fa fony i Neny 4 volana bevohoka tamiko dia tena nitranga izany. Tadidin'izy ireo ny akanjo, ny manga ny akanjo manga sy ny jeans manga ny raiko ary ny renirano sari ny reniko no nanao, satria nandeha nankany amin'ny fankalazana ny fankasitrahan'ny namana izy ireo ary ny reniko dia nanao ilay sari-maingo mitovy aminy izay niarahany tamin'ny fety fiarahany manokana.
Nandeha tany amin'ny tsenan'ny fanitarana atsinanana tany New Delhi ry zareo ary io ihany no teo amin'ny fiainan'izy ireo fa nitana tànana izy ireo ary nihira hira amam-bolana!
Fotoana ahafahako miditra ny fanahiko! "
Hevitra lehibe sy fitsipiky ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao
Ny Fanahy dia ny fandraisana anjara amin'ny raharaha momba ny Zandriny: Ny tanjak'ity raharaha ity dia miankina amin'ny fahatsiarovan'i Prashant ny seho iray tamin'ny fiainan'ny ray aman-dreniny, izay hitany tamin'ny tontolon'ny fanahy, izay nohamafisin'ny ray aman-dreniny. Tsy nisy nilaza tamin'i Prashant momba an'io antsipirihany tsy mazava io amin'ny fiainan'ity ray aman-dreny ity
Izany dia mampahatsiahy ny fizarana iray ao amin'ny James Huston | Ny raharaha James Reininger James Leininger, izay nahatsiarovan'i James Leininger ny ray aman-dreniny tao amin'ny Hotel Hawaiian Royal. Rehefa nolazain'i Jakoba kely ny ray aman-dreniny momba izany fahatsiarovana izany, dia taitra ihany koa izy ireo, raha nijanona tao amin'ny Hawaiian Royal izy ireo dimy herinandro talohan'ny nahaterahan'i James. Tsy nisy nanambara tamin'i James ny diany tany Hawaii na ny fijanonany tao amin'ny Hawaiian Royal.
Ny fanehoan-kevitr'i Prashant dia nahaliana ihany koa, toy ny ao amin'ny tranga vaovao momba ny fanambadiana an'i Alessandrina Samona, nohadihadian'i Ian Stevenson, MD, Alessandrina dia nanamarika fa ny fifandraisana amin'ny fanahy dia mifamatotra akaiky amin'ny foto-drafitr'asa amin'ny volana fahatelo.